तपाईं पनि युवा ? – korea pati
June 12, 2020 Korea patiLeaveaComment on तपाईं पनि युवा ?
अँ त, तपाईंको उमेर ढल्किसक्यो ? अर्थात ४५-५० बर्ष काटिसक्नुभयो ।
तपाईं भन्नुहोला, ‘अब जवानी गयो । वैंश गयो । बुढो भइयो ।’यो तपाईंको उमेरको गणना हो । तपाईं जस्तै हरेक मान्छे उमेरका यि हरेक अंकबाट गुज्रन्छन् । तर, उमेरको अंक गुज्रदैमा कोही बुढो हुन्छन् ?
हामीलाई आफ्नो युवावय असाध्यै पि्रय लाग्छ । हामी जीवनभर युवा जोश, उर्जा, जाँगर, शक्ति, सामाथ्र्य, सिर्जनशिलता रहिरहोस् भन्न चाहन्छौं । जीवनकै एक उर्वर उमेर पनि हो युवावय । तर, ६५-७० बर्ष बाँच्ने हामीसँग यो उर्वर युवावय कति अवधि रहन्छ ?
हामीमा युवापन धेरै समय टिक्नै पाउँदैन । यसको अर्थ यो होइन कि युवा उमेर छिटो बितेर जान्छ । खासमा त उमेर र युवापनसँग त्यस्तो सम्बन्ध पनि छैन । २२-२५ बर्षको व्यक्ति युवा हुन र ५५ बर्षका व्यक्तिसँग युवापन छैन भन्नु भ्रम मात्र हो । युवापन भनेको एक गुण हो । यो उमेर होइन ।
हुन त हामी किशोरवयपछिको अवधिलाई युवावय भन्ने गर्छौं । २० बर्ष पार गरेपछि हामी आफुलाई युवा भएको ठान्छौं । यो युवापन ३०-३५ बर्षको उमेरसम्म गणना गरेर बस्छौं । त्यसपछि हामी आफु ‘युवा’ नरहेको महसुष गर्न थाल्छौं ।
हामीलाई लाग्छ एक निश्चित उमेर अवधिमा पुगेपछि हामी युवा हुन्छौं । तर, यो उमेर होइन गुणको कुरा हो । युवा हुनु भनेको उर्जावान रहनु हो । सिर्जनशिल रहनु हो । सक्रिय रहनु हो । युवा हुनुका यस्ता थुप्रै गुण हुन्छन् । अतः उमेर चाहे जतिसुकै होस्, यी गुणहरु कायम रहेसम्म हामी युवा नै रहन्छौं ।
युवा भनेको आफुलाई उर्बर बनाइराख्नु पनि हो । ति तमाम युवा हुन्, जोसँग जोश छ, जाँगर छ, गतिशिलता छ । मानौं हामी ५० बर्ष पार गरिसकेका छौं । हामीमा जोश, जाँगर र गतिशिलता छ भने हामी युवा हौं । हामीमा बुढेसकाल लागेकै छैन । हामी बुढो भएकै छैनौं ।
युवा सधै जागरुक हुन्छन् । युवा सधै उत्सुक हुन्छन् । युवा सधै उत्साहित हुन्छन् । युवा हुनुको गुण हुन् यी ।
ति व्यक्ति युवा हुन् जो केही नयाँ कुरामा सधै जिज्ञासा राख्छन् । आफुलाई नयाँ कुरामा अपडेट राख्छन् र त्यससँगै परिवर्तन पनि चाहन्छन् । ति व्यक्ति युवा हुन् जो उत्साहित हुन्छन् । सधै उत्साहमय रहनु पनि युवाको गुण हो ।
तपाईं चाहे १५ बर्षको हुनुहोस् वा ५१ बर्षको नै, तपाईंमा यी गुणहरु छन् भने तपाईं युवा हो ।
युवा परिवर्तनका संवाहक पनि हुन् । युवाहरु सधै परिवर्तन चाहन्छन् । उनीहरु गतिशिल हुन्छन् । रजनिश भन्छन्, ‘सबै युवा युवा हुँदैनन्, सबै बुढा बुढा हुँदैनन् । जसलाई युवा हुने कला आउँछ, ऊ उमेरले बुढो भएर पनि युवा नै रहन्छन् । र, जसलाई युवा हुने कला आउँदैन, ऊ युवा भएर पनि बुढो रहन्छ ।’